“ဗုဒ္ဓနှင့် အာဠ၀ကဘီလူး အမေးအဖြေ” | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on July 5, 2014
Posted in: ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဘာသာရေး.	Tagged: ဗုဒ္ဓ, ဘီလူး, ဘုရားရှင်, အာဠ၀က.	Leaveacomment
ဗုဒ္ဓအဖြေ။ ။ ဤလောက၌ ယောက်ျား၏ မြတ်သောဥစ္စာကား ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးနှင့် ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ခြင်းဟု ဆိုအပ်သော သဒ္ဓါတရားဖြစ်သည်။
အာဠ၀ကအမေး။ ။ ချမ်းသာသုခကို ရရှိရန် အဘယ်တရားကို ကောင်းစွာ လေ့ကျက်ရမည်နည်း။
ဗုဒ္ဓအဖြေ။ ။ ချမ်းသာသုခရရှိရန် သုစရိုက်ဆယ်ပါး ကုသိုလ်တရားကို လေ့ကျင့် အားထုတ်ရမည်။
အာဠ၀ကအမေး။ ။ အရသာရှိသော သဘောတရားတို့တွင် အဘယ်အရသာသည် အမြတ်ဆုံးနည်း။
ဗုဒ္ဓအဖြေ။ ။ အရသာရှိသော သဘောတရားတို့တွင် မှန်သောစကားကို ပြောဆိုခြင်း ဟုဆိုအပ်သော သစ္စာတရားသည် အမြတ်ဆုံး၊ အရသာအရှိဆုံး ဖြစ်သည်။
အာဠ၀ကအမေး။ ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတို့တွင် အဘယ်မည်သော အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည် အမြတ်ဆုံးနည်း။
ဗုဒ္ဓအဖြေ။ ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတို့တွင် ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။
အာဠ၀ကအမေး။ ။ ဆင်းရဲဒုက္ခကို အဘယ်တရားနှင့် လွတ်မြောက်နိုင်သနည်း။
ဗုဒ္ဓအဖြေ။ ။ ဆင်းရဲဒုက္ခကို လုံ့လဟု ဆိုအပ်သော ၀ီရိယတရားနှင့် လွတ်မြောက်နိုင်၏။
အာဠ၀ကအမေး။ ။ အဘယ်သို့သော အကြောင်းကြောင့် တမလွန်ဘ၀၌ မစိုးရိမ်ရသနည်း။
ဗုဒ္ဓအဖြေ။ ။ အာဠ၀က သစ္စာ- မှန်သောစကားပြောခြင်း၊ ဓမ္မ- လောကီ၊ လောကုတ္တရာပညာ၊ စာတိ- ထကြွလုံ့လ ၀ီရိယရှိခြင်း၊ စာဂ- ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဟု ဆိုအပ်သော တရားလေးမျိုးနှင့် ပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ပြည့်စုံသူသည် တမလွန်ဘ၀ကို စိုးရိမ်ခြင်း မရှိပေ။
ဗုဒ္ဓက ဤသို့ဖြေဆိုလိုက်ရာ အာဠ၀ကလည်း ကျေနပ်နှစ်သိမ့် သွားကာ သောတာပန်ပီပီ ကြည်ညိုစိတ်ထားနှင့် မြတ်စွာဘုရားအား ချီးကျူးထောပနာပြုလျက်၊ မိမိအတွက် သက်သက်ရောက်လာသော ဗုဒ္ဓအား ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ လျှောက်ထားပြောဆိုလေသတည်း။
← အကောင်းဆုံးခံစစ် (ဂျီဟာဒ်)